प्रविधि Archives - Halkara News
विश्वप्रसिद्ध सामसुङ कम्पनीका अध्यक्षको निधन
विश्वप्रसिद्ध सामसुङ कम्पनीका अध्यक्ष ली कुन–हेको निधन भएको छ। दक्षिण कोरियाली व्यवसायी लीले सन् १९८७ देखि २००८ र सन् २०१० देखि २०२० सम्म सामसुङ ग्रुपको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। एएफपीका अनुसार आइतबार बिहान दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा ७८ वर्षीय लीको मृत्यु भएको हो। सन् २०१४ मै हृदयघातको समस्या भोगेका...
आज रातीबाट क्लिन फिड लागू हुँदै, नेपालमा चल्ने छैनन् १८० बढी यी टिभी च्यानल
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) मध्यरातीपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू हुने भएको छ। क्लिन फिड लागू भएसँगै आज रातीदेखि बीबीसीदेखि भारतीय न्यूज च्यानलहरु, फूटबल, क्रिकेट, कार्टून च्यानललगायत १८० भन्दा बढी विदेशी च्यानलहरु नेपालमा बन्द हुने भएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचन...
बहुप्रतिक्षित एप्पलका आईफोन १२ सिरिज सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार भर्चुअल कार्यक्रम गर्दै एप्पलले आईफोन १२ का चार वटा नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको हो। एप्पलले सार्वजनिक भएका आईफोन १२ सिरिजका फोनहरूमा फाईभ जी नेटवर्क सपोर्ट गर्ने जनाएको छ। एप्पलले आईफोन १२ (६४, १२८ र २५६ जिबी स्टोरेज), आईफोन १२ मिनी ६४, १२८ र २५६ जिबी...
अक्टोबर १३ मा आउँदै एप्पल १२
काठमाडौं । एप्पलले अक्टोबर १३ मा आफ्नो नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अक्टोबर १३ अर्थात् आउँदो मंगलबार आयोजना हुने विशेष समारोहका लागि एप्पलले मंगलबार निम्तो पठाएको छ। उक्त निम्तोलाई एप्पलले हाइ स्पिड निमन्त्रणा भनेको छ। अक्टोबर १३ मा एप्पलले आफ्नो आइफोनको नयाँ संस्करण आइफोन–१२ सार्वजनिक गर्ने अपेक्...
चन्द्रमामा पठाइदै महिलामैत्री ट्वाइलेट, निर्माण गर्न खर्च भयो पौने ३ अर्ब
काठमाडौं । अमेरिकाले २ करोड ३० लाख डलर खर्चिएर एउटा विशेष ट्वाइलेट तयार पारेको छ। महिलाले दिसा पिसाब गर्नका लागि निकै उपयुक्त हुने उक्त ट्वाइलेट कुनै चानचुने ट्वाइलेट होइन। आगामी बिहीबार उक्त ट्वाइलेटलाई अन्तरीक्षमा पठाइँदैछ। झण्डै पौने ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको उक्त ट्वाइलेट टाइटानियमबाट बनेको हो। बिहीबार भर्जिनियास्थि...
भारतले लगायो चर्चित मोबाइल गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध
काठमाडौं । भारतले चर्चित मोबाइल गेम एप पब्जी सहित ११८ चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको केन्द्रीय आइटी मन्त्रालयले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यी चिनियाँ एपहरु भारतको सार्वभौमिकताको लागि खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो। हालैका दिनमा चीन र भ...
स्मार्ट फोन उत्पादन तथा बिक्रीमा पहिलो नम्बरमा रहँदै आएको दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले एकसाथ पाँचवटा नयाँ स्मार्ट फोन सार्वजनिक गरेको छ। सामसुङले आफ्नो ग्यालेक्सी नोट सिरिजका दुई नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ भने ग्यालेक्सी ट्याब्स एस सेभेन, ग्यालेक्सी जेड फोल्ड टू, ग्यालेक्सी वाच थ्री र नयाँ वायरलेस इयरफोन प...
अमेरिकामा पनि टिकटकलाई प्रतिबन्ध ?
भारतले प्रतिबन्ध लगाएको महिना दिन नबित्दै भिडियो एप टिकटकले अब अमेरिकाको पनि प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चिनियाँ लगानीको भिडिओ साझेदार एप टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई शनिबारभित्रै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर हुन सक्ने ब...
अन्तरिक्षमा हतियार परीक्षण गरेकै हो ? अमेरिका र यूकेको आरोप रुसले गर्यो अस्विकार
भू–उपग्रहमा प्रहार गर्न सकिने क्षेप्यास्त्रजस्तो हतियारको अन्तरिक्षमा परीक्षण गरेको अमेरिका र यूकेको दाबीलाई रुसले अस्वीकार गरेको छ। जुलाई १५ मा गरिएको परीक्षणले कुनै पनि भू–उपग्रहलाई खतरा नभएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ। रुसले यसअघि नवीनतम अन्तरिक्ष प्रविधि परीक्षण गर्ने क्रममा एउटा सानो यानमा भएको विशेष उ...
चीनले पठायो मंगल ग्रहमा अन्तरीक्ष यान
अन्तरिक्ष विज्ञानमा निरन्तर फड्को मारिरहेको चीनले पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगलग्रहको अध्ययन गर्न एउटा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ। यो प्रक्षेपणसँगै चीनले आफ्नो स्वतन्त्र मंगल अभियान सुरु गरेको छ। बिहीबार लङ मार्च–फाइभ रकेटको प्रक्षेपण सफल भएसँगै चीनको पहिलो मंगल अभियान सुरु भएको हो। चीनको हेनान प्रान्तबाट प...